China 30-120W IP65 Integrated Intelligent All In One Solar Led Street Light Outdoor 90W Lighting Solar Street Light Ndị na-emepụta na ndị na-ebubata | Kasem
Nwụnye dị mfe:Enwere ike itinye ya na mgbidi ma ọ bụ ogwe osisi. Nkwado AC/DC na-enweghị isi, ikuku. Ogo nrụnye akwadoro bụ 9.8-16ft. Biko lelee na gbanye ọkụ anyanwụ tupu echichi.(The fixing skru na-adịghị gụnyere).
Ihe mgbochi mmiri IP65:Njikwa ìhè anyanwụ & ihe mmetụta ngagharị: Ìhè iju mmiri nke anyanwụ na-akwụ ụgwọ na-akpaghị aka na ìhè anyanwụ wee na-enwu n'uhuruchi. Ewubere na ihe mmetụta ngagharị nwere mmetụta, na-edobe nchapụta zuru oke mgbe achọpụtara ngagharị, tụgharịa ka ọ daa nchapụta mgbe ọ nweghị onye nọ na mpaghara ahụ achọpụtara.
Njikwa ìhè anyanwụ na ihe mmetụta ngagharị:Ìhè iju mmiri nke anyanwụ na-akwụ ụgwọ na-akpaghị aka na ìhè anyanwụ wee na-enwu na ọbọgwụ. Ewuru na ihe mmetụta ngagharị nwere mmetụta, na-edobe nchapụta zuru oke mgbe achọpụtara ngagharị, tụgharịa gaa na ọkara nchapụta mgbe ọ nọ n'ime mpaghara ahụ achọpụtara.
Nchapụta dị elu na njikwa anya:560psc led beads na-ebunye nchapụta dị elu na ọnọdụ ọkụ zuru oke. Mpaghara ọkụ nwere ike ruo 1076sq.ft. Na-abịa na remote controler, na-adaba adaba mezie ọ bụla mode. 3/5/8 h ọnọdụ ngagharị wee gbanyụọ na-akpaghị aka, AUTO, nchapụta zuru oke/ọkara, mmụba nchapụta/mbelata.
Oge ndụ mgbe ọrịsịrị ahịa:Anyị na-ekwe nkwa nkwa ọnwa 24 na ndụ mgbe ọrịre ọrụ na nkwado teknụzụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị ga-enye gị ngwọta n'ime 24-hour.
Ngwaahịa anyị anaghị egbochi mmiri, ọkụ ọkụ, ọkụ na-ekpo ọkụ, nchekwa ike, ihe mmetụta radar, na-achịkwa ọkụ.
Ọkụ n'okporo ụzọ anyanwụ anyị achọghị njikọ siri ike, yabụ ọ dị mfe ịwụnye.
Enwere ike iji mgbidi na-agbanye mgbidi na nrịgo elu (ọnụego ala 5 nwere ihe ngosi) n'ubi, ogige, ọdọ mmiri, ebe a na-adọba ụgbọala, ọdụ ụgbọ elu, plaza, campus, n'okporo ámá, okporo ụzọ, wdg.
Kwado nwụnye Elu
<16 ft maka 60 watts
<19ft maka 90 watts
<22 ft maka 120 watts
Oke nhụta radar: 26ft
Kedu ka esi eji remote?
1. 12 awa na Motion Sensor / Tọgharia
2. Gbanyụọ mgbe awa 3 gachara na ọnọdụ ihe mmetụta ngagharị --- bọọlụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
3. Gbanyụọ mgbe awa 5 gachara na ọnọdụ ihe mmetụta ngagharị ---Bọọlụ flash green)
4. Nke mbụ 3 awa (enweghị ihe mmetụta) + na-esote 9hours ( sensọ ---Bọọlụ flash green + uhie uhie
5. Nke mbụ 5 awa (enweghị ihe mmetụta) + na-esote 7hours (ihe mmetụta) ---Bọọlụ flash green + uhie uhie
6. Nchapụta zuru oke / ọkara ọkụ
7. 12 awa na-enweghị ihe mmetụta (flash na-acha uhie uhie)
8. Gbanwuo --- Agbanyụrụ ọkụ site n'ime obodo n'oge ikpeazụ
1. Ihe mmetụta ahụ mmadụ + Light sensọ
2. Ngwa ngwa ụgwọ anyanwụ panel
3. Nnukwu batrị ike batrị
4. Elu ọkụ SMD edu beads
Ngwa na Wụnye Ụzọ
Nlereanya KAI-30 KAI-60 KAI-90
Ike 30W 60W 90W
Oghere oriọna 60 PCS 120 PCS 180 PCS
Batrị 5AH 10AH 15 AH
Igwe ọkụ anyanwụ 6V/7W 6V/9W 6V/15W
Nha mbukota 610*220*415 730*240*520 660*370*275
Oke panel nke anyanwụ 302*188 397*212 508*231
Nke gara aga: Sensọ Radar Waterproof IP65 30W 60W 90W 120W N'èzí niile n'ime otu ọkụ Led Street
Osote: Ọnụ ahịa dị ọnụ ala maka ụlọ okporo ụzọ ubi IP65 Radar Sensor Integrated Solar Street Light 30W 50W 100W 150W
Igwe anaghị ekpuchi mmiri dị elu Smart Ip65 Led Factory ...
N'èzí anyanwụ Street Light, LED anyanwụ kwadoro P...
Sensọ Motion 40 50W 60 Watt Module Inductive I...